H10 H11 H12 H13 H14 Hepa Hluza imithombo yeendaba ifayibha yeglasi Iphepha - China H10 H11 H12 H13 H14 Hepa Isihluzi seMithombo yeFayibha yeglasi yePhepha abaXhasi, Ifektri -Shanghai Sffiltech Co., Ltd.
Le spunbond eyi-100% yemithombo yeendaba yeefilitha yenziwe ngemisonto esemgangathweni ephezulu ngaphandle kokusebenzisa
nayiphi na iarhente ebophayo. Isetyenziswe ngokubanzi ekwenzeni iikhatriji zokuqokelela uthuli. Oku
izinto ezigqityiweyo ezinzima zizinzile kwaye zihlala zizinzileyo. Eyodwa kwaye inzima igqityiwe
Izinto ezibonakalayo zibonelela ngokuthandeka kakuhle kunye nokuqina okuphezulu. Isakhiwo esahlukileyo kakhulu
umsonto ocolekileyo wentambo unika intsebenzo ephezulu kukucoca ulwelo.
Imithombo yeendaba yecebo lokucoca ulwelo nge PTFE inwebu ibonelela ngesiseko esihle
ukukhutshwa okuhle kunye nokumelana kakuhle nokungena kwamasuntswana kwimithombo yeendaba. Iyathandeka ngokwahlukileyo
ubunzulu bokuncwina kunye nokuphakama ukulungiselela indawo yokucoca enqwenelekayo, kwaye inokusetyenziswa ngokubanzi kwi
Ukucoca i-vaccum kunye neecatridge zeshishini.
Le spunbond ye-100% yemithombo yeendaba yeefilitha yenziwe ngentambo ekumgangatho ophezulu ngaphandle kokusebenzisa nayiphi na iarhente ebophayo. Isetyenziswe ngokubanzi ekwenzeni iikhatriji zokuqokelela uthuli. Izinto ezigqityiweyo ezinzima zizinzile kwaye zihlala zizinzileyo. Izinto ezizodwa nezinzima ezigqityiweyo zibonelela ngezinto ezithandekayo kunye nokuqina okuphezulu. Isakhiwo esahlukileyo somsonto ocolekileyo wentambo sinika intsebenzo ephezulu kukucoca.
Imithombo yeendaba yokucoca ulwelo nge PTFE inwebu ibonelela ngesakhiwo esomeleleyo, ukukhutshwa kothuli kunye nokukhululwa okuhle kunye nokumelana kakuhle nokungena kwamasuntswana kwimithombo yeendaba. Iyathandeka kubunzulu obahlukeneyo bokucoca kunye nokuphakama ukuya kwindawo yokuhluza enqwenelekayo, kwaye inokusetyenziswa ngokubanzi kwi-vaccum cleaner nakwicatridge yoshishino.
1.Impahla: 100% ipholiyesta spunbond kunye okanye ngaphandle PTFE ndizayo
2.Izibonelelo: sinika i-spunbond polyester media enokwenziwa kwi-cartridge, i-cartridge yoyilo enye-iyasusa isidingo seengxowa zokucoca kunye neekheji, ukunciphisa kakhulu ixesha lokufaka. Uyilo lwe pleat lwonyusa indawo yomphezulu wokucoca ukuya kumaxesha ama-2-3.
Ukucoca umoya kokusingqongileyo; Iinkqubo zokungenisa umoya; Isicoci seVacum; Iikhatriji zoshishino; Ukucoca umoya wokucoca umoya weHEPA; Kwinkqubo yokugaya umgubo okanye iinkqubo zokuqokelela uthuli; Iikhabhathi zeekhabhathi zokucoca ulwelo kwimveliso yeemoto; Ukusela Amanzi Amachiza; Amanzi-amayeza amayeza-ulungelelwaniso lwenkqubo ye-RO. . . Kwaye phantse nasiphi na isicelo sokuhluza.
4.Iimodeli: PC200 uthotho, uthotho lwe-PB, uthotho lwe-HP, uthotho lwe-TR
5. Ubunzima: 130gsm - 260gsm